Eli nqaku liyinxalenye yechungechunge lwethu kwikhambo leqhawe, ngokuqala ngeHarri's Journey Intshayelelo kunye neArchetypes yohambo lweHero.
Indlela eya kwiCave Inmost
Iqhawe liye latshintshela kwilizwe elikhethekileyo kwaye liqhubeka lifuna intliziyo yalo, i-cave yangaphakathi. Uyadlula kwindawo ephakathi kunye nabagcini bemiqolo kunye nezivivinyo. Uya kufaka indawo apho into efihlakeleyo yinto efihlakeleyo kwaye apho aya kuhlangana khona nokumangalisa okukhulu kunye nokwesabisa, ngokutsho kukaChristopher Vogler Uhambo lomlobi: Ulwakhiwo lwama-Mythic .
Kumele asebenzise yonke isifundo esiyifunayo ukuze aphile.
Iqhawe livame ukuphazamiseka xa ifika emqolombeni. Uqhekekisiwe yimingeni, evumela ukuba aphinde abuyele ndawonye ngendlela efanelekileyo ngakumbi yexesha elizayo.
Ufumanisa ukuba kufuneka angene ezingqondweni zalabo abemi endleleni yakhe, uVogler uthi. Ukuba uyaziqonda okanye azivelele ngayo, umsebenzi wokugqithisa okanye ukuwuthatha uya kuba lula.
Le ndlela iquka onke amalungiselelo okugqibela enzima. Izisa iqhawe kwindawo enqabileyo yenkcaso, apho kufuneka ukuba isebenzise yonke isifundo afundileyo.
UDorothy kunye nabahlobo bakhe, i-scarecrow, i-Tin Man kunye ne-Cowardly Lion ibhekene noluhlu lwesithintelo, bangene kwilizwe elithile elithile elikhethekileyo (Oz) kunye nabalondolozi babo abodwa kunye nemithetho, kwaye banikwe umsebenzi ongenakwenzeka wokungena emqolombeni ongendawo, nqwelweni. UDorothy uxwayiswa ngengozi ephezulu kulo mbuzo kwaye uyazi ukuba unzima kumgangatho onamandla.
Kukho ummandla oqaqambileyo malunga nomqolomba ongaphakathi apho kucacile ukuba iqhawe liye langena kwintsimi ye-shaman emngceleni wobomi nokufa, uVogler ubhala. I-Scarecrow ihlulwe; UDorothy uqhutywe waya enqabeni ngeenkwenkwezi, njengendlela yohambo lwe-shaman.
Indlela leyo iphakamisa izithintelo kwaye iphinde ibuye iqela kwiqela layo.
Ukukhawuleza kunye nomgangatho wokufa okanye wokufa kwelo meko kugxininiswe. UToto ubalekela ukukhokela abahlobo kuDorothy. Intsingiselo kaDorothy uyazi ukuba kufuneka acele uncedo lwababambisene naye.
Iingcamango zomfundi malunga nabalinganiswa zijikelelwe phantsi njengoko zibona umntu ngamnye ebonisa iimpawu ezintsha ezimangalisayo ezivela phantsi kwengcinezelo yendlela.
Ikomkhulu lalabahlali lilondolozwe ngokukrakra. Abalingani bakaDorothy bavakalisa ukungaxhasi, bakhuthazane kunye nokucwangcisa ukuhlaselwa kwabo. Bangena kwiibhokhwe zabalindi, bangene kwi-castle, basebenzise amandla, i-Tin Man's ax, ukuba baqothule uDorothy ngaphandle, kodwa kungekudala bavalwe kuzo zonke iinkalo.
Ukunxibelelana noMoya Wehlabathi
Indima yeDrummer Boys kwiMfazwe yaseMelika
Iingqungquthela Yenza Isimo Sengqondo Sithathe Ngosuku Lwezilwanyana
Yintoni Ukugcinwa Kwezilwandle?
Xa 'iDès Que' Ifuna ntoni ukudibanisa?
Iincwadi zeZen zokuqala
Indlela Yokufumana Iimpawu Ezilungileyo KwiSikolo SoShishino